Teolojia liberaly - Wikipedia
Ny kristianisma liberaly, izay antsoina koa hoe teolojia liberaly dia firehana ara-pivavahana kristiana izay maneho fiheverana avy amin'ny Baiboly sy ivelan'ny Baiboly, nanomboka nisy tamin'ny taonjato faha-18. Vokatry ny fiheverana ara-pilozofia sy ara-pivavahana tamin'ny Taonjaton'ny Fahazavana (taonjato faha-18) izany.
Ny teolojia liberaly, amin'ny ankapobeny, dia fomba fanaovana fanadihadiana ny Baiboly, atao hanakarana ny momba an'Andriamanitra nefa tsy miankina amin'ny tenim-pinoan'ny fiangonana (izany joe tsy dogmatika), fa amin'ny fampiasana ny Soratra Masina ampiharana ny fomba fanaovan-tsikera lahatsoratra mitovy tsy misy valaka amin'ny fitsikerana ny lahatsoratra sy ny sary nataonlny olona tamin'ny Andro Taloha rehetra. Ny kristianisma liberaly hatramn'ny nisiany dia nandray ny fomba fiasa amin'ny sehatry ny fikarohana ara-tsiansa tamin'ny Taonjaton'ny Fahazavana, izay nampiditra ny fanaporofoana amin'ny alalan'ny fanandramana sady mampiasa ny sain'olombelona ho fototry ny fivoasana ny Baiboly sy ny fiainana sy ny finoana ary ny teolojia. Tsy mametraka mialoha ny fahefan'ny Soratra Masina na ny fahamarinan'ny tenim-pinoana (dogma) ny teolojia liberaly, fa mandray ny fomba fijerin'ny filozofia moderna (ka azo ampitahaina amin'ny modernisma katolika sy ny modernisma presbiteriana). Mety hihazona foto-pampianarana iraisan'ny Katolika sy ny Ortodoksa, eny fa na dia ny Protestanta fondamentalista aza ny teolojia liberaly.
Ny teolojia liberaly dia ao amin'ny firehana teolojika nisy an'i Friedrich Schleiermacher (1768-1834) sy i Adolph von Harnack (1851-1930) ary indrindra tamin'ny fiovam-penitra amin'ny fitsikeran-dahatsoratra tamin'ny taonjato faha-19, izay nahitana an'i Albrecht Ritschl (1822-1889) sy i Ernst Troeltsch (1865-1923) izay nitondra fanavaozana teo amin'ny fivoasana ny Baiboly. Isan'ireo mpampahafantatra ny teolojia liberaly ny pastora alemàna Gustav Frenssen (1861-1945) ilay nanoratra ny Dorfpredigten, sy ny pastora Charles Wagner tao Frantsa.
Nialoha lalana ny teolojia liberaly ny asa soratr'ireto olona tanisaina manaraka ireto: i Heinrich Eberhard Gottlob Paulus (nanoratra ny Das Leben Jesu als Grundlage einer reinen Geschichte des Urchristentums, tamin'ny taona 1828) sy i David Friedrich Strauss (nanoratra ny Le Christ de la foi et le Jésus de l'histoire, tamin'ny taona 1865) ary i Ferdinand Christian Baur (nanoratra ny Kritische Untersuchungen über die kanonischen Evangelien, ihr Verhältniss zu einander, ihren Charakter und Ursprung, tamin'ny taona 1847).
Toetoetran' ny kristianisma liberaly[hanova | hanova ny fango]
Mankasitraka ny fifanakalozana eo amin'ny fivavahana samihafa sy ny kolontsaina samihafa izy ka ataon'ny mpitsikera azy ho mandantsa-danja ny Baiboly;
Maro ny firehana hita eo aminy, ka isan'izany ny fandavana ny Trinite (onitarisma) izay indraindray mirona mankany amin'ny katarisma;
Aminy dia natao ho an'ny olon-drehetra tsy ankanavaka ny famonjena satria mino ny fahafahan'ny olombelona hihatsara sy ny sivilizasiona hatrany izy;
Mikatsaka fiainana tongalafatra izay hahatonga ny fivavahana kristiana ho afa-miasa eran'izao tontolo izao;
Tsikerainy ny fampianarana mametra ny zavatra inoana sy ny fanao sy ny andrim-piangonana ary ny fahefana manery hanaraka fenitra iray;
Mpankasitraka ny fifampiresahan'ny samy fivavahana sy ny fahamaroan'ny fivavahana izy;
Mpankasitraka koa ny fisarahan'ny fivavahana sy ny fanjakana koa izy.
Hita tao amin'ny "https://mg.wikipedia.org/w/index.php?title=Teolojia_liberaly&oldid=979327"
Voaova farany tamin'ny 9 Janoary 2020 amin'ny 14:43 ity pejy ity.